बजेटमा नेताका प्रतिक्रिया : वितरणमुखी बजेटले परिणाम कम आउने
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २१:४३
काठमाडौं । सरकारल सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को बजेटलाई नेताहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनिहरुले बजेट वितरणमुखी भएको र परिणाम कम आउने खतरा भएको टिप्पणी गरेका छन् । नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बजेट वितरणमुखी भएको बताएका छन् । सरकारसँग बजेट कार्यान्वयन गर्ने क्षमता.....
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ का लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण आयोजना तथा राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनालाई मुख्य प्राथमिकतासाथ बजेट ल्याएको छ । राष्ट्रिय गौरवका महत्त्व र पूर्वाधार विकासका आयोजनालाई बजेटमा निरन्तरा दिइएको छ । अधिकांश पुरानै आयोजनालाई बजेटमा राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार.....
आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट घाटा ५ खर्ब
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:५८
काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटघाटा झण्डै ५ खर्ब रुपैयाँ रहेको देखिएकाके छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विनियोजन भएको बजेटलाई आवश्यक खर्च व्योहर्ने स्रोतमध्ये राजश्व संकलनबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब १३ करोड, वैदेशिक अनुदान.....
भ्रमण वर्षको उपेक्षा : पर्यटन र हवाई क्षेत्रमा ६ अर्ब रुपैयाँ घट्यो
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:१७
काठमाडौं । सरकार आफैले घोषणा गरेको भ्रमण वर्षलाई उपेक्षा गरेको पाइएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले हवाई र पर्यटन क्षेत्रको बजेट चालू वर्षको भन्दा ६ अर्ब २३ करोड ४० लाख रुपैयाँले घटाएका हुन् । संसदको दुवै सदनमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा हवाई.....
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसदकाे दुवै सदनमा बुधबार प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ काे बजेटकाे पूर्ण पाठ
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार २०:०१